Denmark kuuraya mamirioni emaminks pamusoro pecoronavirus kutya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Denmark kuuraya mamirioni emaminks pamusoro pecoronavirus kutya
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Denmark Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vakuru veDanish, vachinetsekana nezve shanduko yecoronavirus, vakafunga kuparadza minks dzese munyika. Dambudziko rakadai rakamirira mhuka dzinosvika mamirioni gumi nemanomwe. Sarudzo yehurumende yeDenmark yakaziviswa na Prime Minister Mette Frederiksen. Sekureva kwaDanish PM, hutachiona hwakatendeuka pakati pemink uye hwakapfuudzwa kuvanhu.
Shanduro yakachinja yeSars-CoV-2 coronavirus yakawanikwa mune vanhu gumi nevaviri muNorth Jutland, sekureva kwevakuru vehutano veDanish. Njodzi ndeyekuti shanduko iyi inogona kukanganisa kushanda kwejekiseni remunguva yemberi uye kuwedzera njodzi yehutachiona husapararire kwete kune dzimwe nzvimbo dzeDenmark, asi kuEurope yese.
Denmark ndiyo nyika inogadzira mink furs pasi rose. Parizvino, kune anopfuura chiuru chemapurazi ekuberekesa mink munyika. Anopfuura mazana mapurazi akawanikwa aine chirwere checoronavirus, sekureva kwevakuru veDanish. Pa chetatu chavo, zvipfuwo zvemhuka dzinotakura mvere zvakatoparara zvachose. Kubhadhara kunobhadharwa kune vagadziri vemink.
Muna Chikumi, mushure mekuputika kwezvirwere muNetherlands, zviremera zvenyika ino zvakaraira kuparadzwa kwemhuka dzese dzine hura mumapurazi akanganiswa.